Legalista hatraiza moa ianao?
2009-10-08 @ 23:05 in Politika
Na dia mety ho fohy dia fohy aza ny resako eto dia ataoko fa ilaina ihany ny mampahafantatra ireto nandany ny alina nikarohako azy ireto. Mazava loatra fa nisy sombitsombin-tadidy matoa tahaka izao no endrika hitako ary mety hisy koa ny tsy fantatro fa isika no mifanampy sy mifanoro eto.
Legalista hatraiza moa ianao? Raha izaho manokana dia legalista aho eo amin'ny sehatry ny firenena aloha voalohany indrindra. Manaja sy mankatò izay heverina ho lalàna mipetraka eto amin'ny fireneko dia i Madagasikara aho. Eo amin'ny zoko dia nomena adidy aho hifidy izay olona hitondra ahy, na eo amin'ny tanànako, na eo amin'ny fireneko. Tsy nifidy ilay olona nitondra ny tanànako (Antananarivo) aho saingy vitsy an'isa tamin'ny fifidianana. Noho izany, manaiky ny tapaky ny maro an'isa aho. Eo amin'ny sehatry ny firenena indray, nifidy ny olona nofidiana ho filoham-pirenena aho, saingy nisy nisomptra am-pamitana ny asany izy. Tsy ekeko izay fanosihosena ny zoko, nataon'ny sasany izay ka dia nijoro aho nanohitra ny fanonganam-panjakana ary manohitra mandraka androany. Enga anie hanohy avokoa ianareo rehetra.
Fa ny tsy tsy misongadina loatra dia mbola legalista ihany aho indrindra fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Manambara mazava eo amin'ny andininy fahaefatra ny satan'ny Vondrona Afrikana, laharana (p) fa Melohiny sy tsipahiny ny fiovam-pitondrana tsy mifanaraka amin'ny Lalampanorenana, ary dia mankasitraka sy mampanaja io voasoratra io aho. Ao amin'ny laharana (h) dia mananjò ny Firaisambe Afrikana ny hiditra an-tsehatra rehefa misy toe-draharaha tena manahirana. Marina fa tsy mbola tonga any amin'ny fifamonoana isika sady sanatriavina rahateo izany fa misy ihany koa ny (i) fahazoan'ny firenena mpikambana vitsivitsy ao anatiny mangataka ny fidiran'ny Firaisambe Afrikana an-tsehatra hamerenana amin'ny laoniny ny fandriampahalemana sy ny filaminana.
Misoritra ao amin'ny satan'ny Firaisambe Afrikana vita tany Lomé tamin'ny 11 jolay 2000 noho izany fa tsy ekena ny fanonganam-panjakana, na dia ny fiovana tsotra tsy mifanaraka amin'ny Lalampanorenana aza (nandika io koa noho izany ny filoha Ravalomanana). Nisy ny nanao fanamarihana fa anisan'ny fiovana lehibe tao amin'ny Satan'ny Firaisambe Afrikana (UA) io fahafahana miditra an-tsehatra io raha tsy azo natao kosa tamin'ny Lalampanorenan'ny OUA. Izay no nampiato an'i Madagasikara indroa miantoana (2002 sy 2009). Ny an'ny SADC moa dia tsy voakaroko intsony saingy heveriko fa efa ampy aloha iny.
Mariho fa tsy hitako, iaraho mitady hoe azafady indrindra, ao amin'ny Fifanarahan'ny Cotonou ifanarahan'ny Vondrona Eoropeana amin'ny Vondrona Afrika, Pasifika, Karaiba, loatra ny fanamelohana ny fiovam-pitondrana tsy mifanaraka amin'ny Lalampanorenana ao amin'ny firenena fa manohitra kosa ny fakana mersenera, fividianana fitaovam-piadiana mahery vaika ary miady amin'ny fampihorohoroana. Ny Fifanarahan'i Cotonou moa no dimbin'ny Fifanarahan'i Lomé nosoniavina tamin'ny febroary 1975 tsy nilaza na inona na inona amin'ny fepetra politika.
Ny fitiavan-tanindrazana tsy midika ho fankahalana vahiny
Misy ankehitriny ny milaza azy ireo ho Vondrona Mpiaro ny Fiandrianam-pirenena (VMF), manondro ny tenany ho tia tanindrazana, fa ny hafa nitady vahaolana niaraka tamin'ny vahiny kosa heveriny fa mpiankina amin'ny vahiny mitady hanjanaka an'i Madagasikara. Izay no tsy ankasitrahany velively ny fidiran'ny vahiny handamina ny raharahan'i Madagasikara, nefa ny firenena dia efa nanasonia manaiky ny voalazan'ny Satan'ny Vondrona Afrikana. Diso hevitra avokoa noho izany izay rehetra milaza fa tsy misy Vondrona afa-mitsabaka amin'ny tokantranon'ny firenena iray tandindonin'ny fikorotanana sy ny ady an-trano (tsy misy antony idirany kosa raha milamina tsara sy mandry fehizay ny firenena). Mpankahala vahiny izy amin'io fotoana io fa tsy tia tanindrazana velively.
Izaho kosa manaiky ny fanelanelanana ataon'ny vahiny, satria nantsoina izy ireo, na dia tsy mahafa-po velively aza ny vokatra avy tao noho ny hamehan'ny sasany. Izay nosoniavina dia toavina, noho izany raha lasa filohan'ny tetezamita i Andry Rajoelina, noho ny voasoratry ny Satan'ny tetezamita voasonia tao Maputo dia tsy tokony hanakana velively ny firotsahany hofidiana ho filoham-pirenena aho. Manandanja lehibe amiko, noho izany, raha tsy manasonia izay mpandala ny tsy fanekena ny hitondran'ny mpanongam-panjakana ny firenena. Ohatra ratsy ho an'ny hafa sy ho an'ny taranaka izany ka tsy tokony ho ekena. Misy ny zavatra azo ekena fa io fanonganam-panjakana io kosa, amiko, tsy tokony holeferina velively.
Ny Legalista no taranaky ny MDRM eo amin'ny fomba fitolomana
Misy ny zavatra tsara marihina eo amin'ny tantaran'i Madagasikara, mifandraika amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Tsy hoe nosy isika dia tsy hijery afa-tsy ny eto, fa ilaina ihany koa ny mijery ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa manamora izany koa ankehitriny ny aterineto. Ny MDRM raha nanao ny tolony araka ny lalàna dia nifototra tamin'ny fifarahana iraisam-pirenena. Tsy atao mahagaga noho izany raha narangarangan'ny dokotera Ravoahangy sy ny dokotera Raseta ny Satan'i Atlantika ahafahan'ny mponina manapa-kevitra ny amin'ny endri-pitondrana tiany izay mampirona be dia be ho amin'ny fahafahana manome fahaleovantena ny zanatany. Tsy izay velively anefa ny ao an-tsain'i Frantsa Afaka koa dia nanao fivoriana tao Brazzaville ry zareo mametraka fa akarina ho avo kokoa ny fampanajana ny zon'ny olon'ny zanatany.
Ny MDRM eo amin'ny olomboafidy noho izany dia mijery ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy variana miondrika amin'ny raharahan-tokantranon'ny tena. Nisinisy ihany anefa ireo tsy nahatakatra izay fomba fijery toa milamina izay fa babon'ny filazana manao hoe tsy misy fahaleovantena azo raha tsy misy ra latsaka. Ny avy amin'ny fikambanana miafina tarihin'ny Jina sy ny Panama nisovoka tao amin'ny antoko MDRM no tena nandrisika io foto-kevitry ny ady io. Nisara-kevitra tsy mbola nisara-dalana ny mpiara-mitolona ka izay no niteraka ny 29 marsa 1947.
Fa inona no ilàna izany resaka rehetra izany? Misy manko ireo mihevitra fa raha tsy manaiky ny hanasonia ny notapahin'ny GIC ny filoha Ravalomanana noho i Andry Rajoelina notondroina ho filohan'ny tetezamita dia noho ny fankahalana manokana sy ny tantara hoe efa niaraka hoe ny zanakavavin'ny filoha sy ingahy kely ity. Tsy any velively ny resaka fa adidy amin'ny fampanajana ny fifanarahana sy ny lalàna iraisam- pirenena no antony lehibe handavana ny mpitarika ny fanonganam-panjakana tsy hitantana ny firenena.
jentilisa 09 oktobra 2009 amin'ny 01:09